DJIBOUTI Matin, DJIBOUTI Midi, DJIBOUTI Soir: Waraysigii Cadceed (12 jan. 2013)
Sabtidii ina dhaaftay (12 jan. 2012), waxa waraysi tilifoonka ah ila yeeshay Radio Cadceed iyo suxuufiyadda caanka ah ee Rooda-Raaxo oo igala soo xidhiidhay Houston,Texas. Halkan ka daawo waraysigaa murtidiisii.
Nasiibdarro, wakhtiga oo noo saamixi waayay awgeed, dhacdooyinka ka aloogan geeska Africa iyo sobobaha ka dambeeya umaanu gudo-gelin si tifo-tiran. Siiba, arrinta murugsan ee baryahan dambe ka socota degmada Saylac iyo lugta uu ku leeyahay dagar-qabe Ismaaciil Cumar Geelle!
Arrintaa oo wali cakiran iyo maleeshia-beeleedyo lagasoo abaabulayo Jabuuti oo kusoo qul-qulaya degmada Saylac waan kusoo noqondoonaa marka wakhtigu ii surto gasho. Waayoo dhagar-qabe Ismaaciil Cumar Geelle, axadii 13 kii Jan. 2013 wuxu usoo baxay degmada Cali-Cadde oo fadhiisin u ah maleeshia-beeleedda uu madaxa ka yahay ee qaska ka wadda galbeedka Soomaliland, isaga oo ku mar-marsiiyo ka dhigtay inuu xadhiga ka jarayo warshad curisa laydh tiriiga oo ku socota tamarta cadceeda.
Markaa waraysi labaad baan idiin soo gudbin doona marka ay suurtowdo. Imiga ahaan waakan waraysigii u horeeyay.
Publié par Badeed Kulan à 23:18
Libellés : 19Mars1967, 27 septembre 1990, afar, ARD, DAF, Djibouti, FRUD, Gadabourci, Geelle, IOG, Issa, Jabuuti, Kulanbadeed, MRD, PND, PRD, RPP, Somalia, Somaliland, USA/Djibouti